ईन्टाग्राममा तपाइँको पहिलो विज्ञापन बनाउनु अघि चालहरू तपाईंले थाहा पाउनु पर्दछ क्रिएटिव अनलाइन
जुडित मर्सिया | | सामाजिक नेटवर्क, धेरै
निस्सन्देह इन्स्टाग्राम एक सामाजिक नेटवर्कको साथ एक हो बढी महत्वपुर्ण हाल यो प्लेटफर्म धेरै छिटो भन्दा बढि बढेको छ १ million० मिलियन सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू। यो यस कारणले कम्पनीहरूले विज्ञापन गर्न को लागी एक लाभदायक शर्त को रूप मा Instagram छनौट गर्न शुरू गर्दछ।
राम्रो अभियान बनाउन र फाइदा लिन इन्स्टाग्राम विज्ञापनहरू अधिकतम तपाईं यसको मुख्य विशेषताहरु थाहा हुनु पर्छ। तर पहिले हामी किन इन्स्टाग्राम छनौट गर्छौं र अर्को सामाजिक नेटवर्क होईन।
1 किन इन्स्टाग्राम छनौट गर्नुहोस्?
2 इन्स्टाग्राम विज्ञापन टाइपहरू
3 तपाईंको अभियानका उद्देश्यहरू
4 इन्स्टाग्राममा तपाईंको विज्ञापनहरू गर्न सिफारिसहरू
5 तपाईंको विज्ञापनको नतीजा मूल्यांकन गर्नुहोस्
किन इन्स्टाग्राम छनौट गर्नुहोस्?
यो संग प्लेटफर्म मध्ये एक हो बढी वृद्धि हालका वर्षहरूमा। सामाजिक नेटवर्कहरू मध्ये हामी इन्स्टाग्रामलाई मुख्य व्यक्तिहरू मध्ये एक रूपमा भेट्छौं, स्पेनमा त्यहाँ छन् बाह्र लाख भन्दा बढी सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू। यो चित्रले हामीलाई भन्दछ कि यसले हामीलाई एक दिन्छ शक्तिशाली जन
यो सत्य हो कि सुरुमा इन्स्टाग्राममा विज्ञापन गर्दा यो कसरी फिट गर्ने राम्रोसँग थाहा थिएन। ब्रान्डको प्रभावकर्ता मार्फत एक उपस्थिति थियो। हालका महिनाहरूमा यो विकसित भएको छ र धेरै अधिक दृश्य र रणनीतिक ढाँचा। ब्रान्डसँग छ यसको लक्षित दर्शकहरूमा पुग्न सफल भयो.
La हामीले उल्लेख गरेका श्रोताहरू जवान छन्, सबैभन्दा ठूलो उपस्थितिको दायरा १ and र २ years बर्ष बीचमा चल्दछ। हामीले सोच्नु हुँदैन कि त्यहाँ कोही पाको व्यक्तिहरू छैनन्, वास्तवमा, अधिक भन्दा अधिक प्रयोगकर्ताहरू जो 19० बर्ष भन्दा माथिको उमेरमा सामेल भइरहेका छन्।
सामग्रीको सन्दर्भमा, सब भन्दा विकसित हुने प्लेटफर्म मध्ये एक हो। यो केवल फोटोहरू ह्या hanging्ग गर्ने सम्भावनाको प्रस्तावबाट सुरू भयो, यसको ढाँचा आवश्यक रूपमा वर्ग थियो र फिल्टरहरू लागू गर्न सकिन्थ्यो। पछि उसले भिडियो समावेश गर्‍यो, एक भन्दा बढी फोटोहरू अपलोड गर्न सक्षम हुँदै जस्तो कि यो एल्बम हो, छवि आकारको ढाँचामा अधिक लचिलो भयो। कथाहरू, धेरै अन्य परिवर्तनहरू बीच।
इन्स्टाग्राम विज्ञापन टाइपहरू
यस सामाजिक नेटवर्कले हामीलाई पूरा गर्न अनुमति दिने विभिन्न विकल्पहरूको बारेमा सचेत हुनु महत्त्वपूर्ण छ। विज्ञापनका प्रकारहरू निम्न छन्:
एउटा फोटो विज्ञापन, त्यो हो, ती विज्ञापनहरू हुन् जसमा फोटो समावेश छ।
भिडियोको लागि विज्ञापनयस अवस्थामा हाम्रो समर्थन बढी पूर्ण छ।
अनुक्रम विज्ञापन, यो छवि वा भिडियोको स्थिर जीवन हो, हामी यसलाई प्रयोग गर्दछौं जब हामीलाई बिभिन्न उत्पादनहरू वा सेवाहरू देखाउन आवश्यक पर्दछ।
कथाहरू विज्ञापनयस प्रारूपले भर्खर हाम्रो अभियानको अनुभव पूरा गरिसक्यो। हामीले दिमागमा राख्नै पर्छ कि आकार र समय अवधिमा फर्म्याट फरक फरक छ। तिनीहरू ठाडो हुनै पर्छ र १ 15 सेकेन्ड भन्दा बढी हुन सक्दैन।
तपाईंको अभियानका उद्देश्यहरू
यस बीच विभिन्न लक्ष्यहरू हामी इन्स्टाग्राम विज्ञापनमा प्राप्त गर्न सक्छौं कि हामी निम्न हाइलाइट गर्न सक्छौं:
ट्राफिक प्राप्त गर्नुहोस्। जब हामी ट्राफिकको बारेमा कुरा गर्छौं यसको मतलब हाम्रो खातामा प्रयोगकर्ताहरूबाट अधिक भ्रमणहरू हुनेछन्। विज्ञापनले लक्षित दर्शकहरूलाई हाम्रो वेबसाइटमा पुनःनिर्देशित गर्दछ।
अन्तर्क्रियामा वृद्धि, त्यो हो, हाम्रो दृश्यता विस्तार गर्नुहोस् र हाम्रो बाँकी पोष्टहरूबाट जैविक प्रतिक्रिया प्राप्त गर्दै अन्तमा। यस अवस्थामा, प्रयोगकर्ताले हाम्रो सामग्रीमा रुचि राख्छ।
रूपान्तरण, जब हामी प्रयोगकर्ताले कुनै कार्यहरू सम्पन्न गर्न चाहन्छौं जस्तै उत्पादनको खरीद, एक एपको डाउनलोड, हाम्रो न्यूजलेटरको सदस्यता, आदि।
इन्स्टाग्राममा तपाईंको विज्ञापनहरू गर्न सिफारिसहरू
बढी सफल हुन हामी तपाईंलाई केहि बताउँछौं सुझाव र यस तरीकाले तपाईको व्यावसायिक लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नुहोस्। तपाइँको विज्ञापन पूरा गर्न को लागी प्रयोग गर्नुहोस् विज्ञापन प्रबन्धक जहाँ तपाइँ कल्पनाहरू भन्दा धेरै सजिलो तरिकामा विज्ञापनहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। यो उपकरण प्रयोग गर्नुहोस् तपाईंलाई अन्य प्रकारका अभियानहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिनेछ जुन अनुप्रयोग मार्फत उपलब्ध छैनन्। तपाईं गर्नुपर्छ श्रोता परिभाषित गर्नुहोस् तपाईं लक्षित गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसकारण, यसले तपाईंलाई विशिष्ट र समान दर्शकहरूमा पुग्न अनुमति दिनेछ। सबै डाटा बचत हुनेछ र तपाईं तुलना गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, दायरा मार्क, अन्तर्क्रिया, गणना पुन: उत्पादन, अन्य लाभहरूमा।
व्यक्तिहरू एक प्रतिमा आइकन समात्दै
तपाईंको विज्ञापनको नतीजा मूल्यांकन गर्नुहोस्
अभियान शुरू गरेपछि यो महत्त्वपूर्ण छ प्राप्त परिणामहरूको विश्लेषण गर्नुहोस्। तपाईंको प्रशासकबाट तपाईंसँग सबै परिणाम मापन ग्राफहरूमा पहुँच हुनेछ। यो भविष्यका निर्णयहरू गर्न तपाईंलाई अनुमति दिनेछ लक्ष्य सेट अनुसार।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » तपाईंको पहिलो इन्स्टाग्राम विज्ञापन